AMAPHUPHO | Page 57
By info on September 8, 2015 in amaphupho nezincazelo, ngokubhala
Ukubhala Uma uphupha ukuthi uyabhala, kusho izinto ezinhle uma iphepha lihlanzekile linobunono – uzoba nomshado onenjabulo kanye nezingane ezinhle. Uma uzama ukubhala kodwa ungakwazi, noma uklebhula iphepha, kusho ukuthi awuhlakaniphile ngendlela oyicabangayo futhi uzozithola usenkingeni maduzane.
By info on September 7, 2015 in amaphupho nezincazelo, ngokubhukuda
Uma uphupha ukuthu uyabhukuda, kuwuphawu oluhle uma ikhanda lakho lingaphezulu kwamanzi – ikakhulukazi emsebenzini nasebudlelwaneni bakho nabanye. Uma amanzi ehlanzekile ecwebile, kuhle kakhulu. Uma ubhukuda phansi kwamanzi kusho ukuthi kunezinkinga ezizayo kuwe, ikakhulukazi uma amanzi efiphele.
By info on September 5, 2015 in amaphupho nezincazelo, ngokugibela
Uma uphupha ukuthi kunento oyigibelayo, kusho ukuthi uzophumelela kangakanani empilweni. Uma ufika phezulu, uzofinyelela izinhloso zakho empilweni, othandweni nasemsebenzini. Uma ungafiki, noma uwa phansi, kusho ukuthi uzodumala. Uma usugibelile wafika phezulu emaphusheni akho futhi usuyehla, kusho ukuthi kuzoba noshintsho oluhle empilweni yakho maduzane.
By info on September 4, 2015 in amaphupho nezincazelo, ngemali
Imali Uma uphupha ukuthi unemali, kuwuphawu olubi futhi kuphathisa kabi uma uyisebenzisa noma uyilahla, kodwa kuyinhlanhla futhi kusho ukuthuthuka uma uyinikezwa noma uyithola. Uma uphupha ukuthi ulanda imali oyilweletisile kumuntu, kusho ukuthi kuzoba nokudlulela phambili entweni ozama ukuyenza. Uma umuntu ekunikeza imali kodwa omunye ekuphuca yona emva kwalkho, kusho ukuthi kunomuntu uzama ukukuthakatha noma ukuntshontsha […]
By info on September 2, 2015 in amaphupho nezincazelo, ngokuthukuthela
Uma uphupha ukuthi uthukuthele, ngemvamisa kusho ukuthi kunebhadi ekusaseni lakho. Uma ucikekile nje kancane, kusho ukuthi uzothola izindaba ezimbi maduzane, kodwa uma umuntu ekuthukuthelise ngempela uzohlulwa yizitha zakho. Uma uthukuthele ngoba kunomuntu okuthukile, kuzoba nokulwa nophathina wakho noma ebhizinisini lakho.
Amaphupho ngamathambo aphukile
By info on September 1, 2015 in amaphupho nezincazelo, ngamathambo aphukile
Uma uphupha ukuthi uphuke amathambo, ngemvamisa kusho ukuthi kuzoba nezikhathi ezinzima ezizayo ekusaseni lakho. Uma kuwukuthi imilenze yakho ephukile, kusho ukuthi uzoshada nomuntu ongenawo amandla. Uma ungowesifazane kusho ukuthi umyeni wakho uzoba yivila nesidakwa esingakwazi ukukusekela. Uma ungowesilisa, kusho ukuthi unkosikazi wakho uzoba ngumuntu olungile, kodwa angabi namandla anele okunakekela umuzi.
By info on August 31, 2015 in amaphupho nezincazelo, ngezinwele
Uma uphupha ukuthi ubuka izinwele zakho, uzothola uthando maduzane, kodwa lowo muntu kungenzeka ukuthi uthanda omunye umuntu. Uma uphupha ukuthi ukama izinwele zakho, kusho ukuthi uzolahlekelwa yinto ebalulekile, futhi ukushintsha umbala wezinwele zakho kusho ukuthi kunenkatahzo ezayo. Uma izinwele zakho sezikhule kakhulu zizinde, kusho ukuthi usungumqambimanga futhi uma sezibomvu, kufanele uqaphele izitha empilweni yakho. Uma […]
By info on August 30, 2015 in amaphupho nezincazelo, ngeminwe nezandla
Uma uphupha ukuthi izandla zakho zingcolile, kusho ukuthi ubhekene nokulingeka ukwenza into embi. Uma zingagcolile nje kuphela kodwa zinamfuka futhi, kusho ukuthi uzohlupheka ngokwezimali ubempofu ngenxa yalento olingekayo ukuyenza. Uma isandla sakho noma iminwe yakho ilimele, uzolahlekelwa umsebenzi maduzane futhi uma umuntu enqume umunwe wakho noma isandla sakho, kusho ukuthi maduzane uzolahlekelwa yinto oyisebenzele kanzima. […]
Mayelana Namaphupho osikweni lwesiZulu
By info on August 30, 2015 in amaphupho nezincazelo, Namaphupho osikweni lwesiZulu
Ukuchaza amaphupho kuyingxenye esemqoka osikweni lwamaZulu. Umbuso wemimoya uyingxenye yansukuzonke empilweni yemiphakathi eminingi yama-Afrika, futhi kumaZulu ngamaphupho awumongo alombuso. Izincazelo nemifanekiso okwakha izwe lamaphupho lamaZulu kuguquguquke ngokwehlukana kwimifanekiso yaseNtshonalanga, futhi kwenza uhlelo lwezincazelo olunothile noluvusa imizwa. Read more …
By info on August 14, 2015 in izaga
Ngezansi izaga nezincazelo zazo Isaga Incazelo Abantu abayi ngandawonye bengemanzi ∼Abantu abavumelani bonke ngento eyodwa. Akukho ndlovu yasindwa umboko wayo ∼Akekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe. Akukho thusi lathetha lilodwa ∼Akekho umuntu onganengwa engaqalwanga. Akukho zinyane lemboma ladliwa yingwenya kwacweba isiziba ∼Uma uzwise omunye umuntu ubuhlungu noma umbulale, ngeke ukuthole ukuphumula abakubo nabangani bakhe bazomphindiselela. Akuqhude […]